सरकारकै अनिच्छामा क्लिनफिड नीति लागु भएन: पौडेल - सुनाखरी न्युज
सरकारकै अनिच्छामा क्लिनफिड नीति लागु भएन: पौडेल
Posted on: January 1, 2019 - 6:46 pm
निर्मलराज पौडेल/प्रबन्ध निर्देशक–वेलकम एड:
निर्मलराज पौडेल नेपालको विज्ञापन क्षेत्रको निकै चर्चित नाम हो । नेपाल विज्ञापन संघका पुर्व अध्यक्ष एवं वेलकम एड एण्ड मार्केटिङका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल विज्ञापन बजारमा एड गुरुका नामले समेत चिनिन्छन् । उनीसँग नेपालको विज्ञापन बजार, विज्ञापनको आकार, प्रतिष्पर्धा, आगामी दिनमा नेपाली विज्ञापन बजारको संभावना र वनेरपनि लागु हुन नसकेको क्लिन फिड नीति लगायतका बिषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रश्तुत छ, सुनाखरी न्युजकालागि शिव दुवाडीले वेलकम एडका प्रबन्ध निर्देशक एवं एड गुरु पौडेलसँग गरेको कुराकानीको संपादिन अंशः
नेपाली विज्ञापन बजारको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको विज्ञापन बजार प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकीरहेको छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा दशैं तिहार सकीएपछि विज्ञापन बजारको टे«ण्ड र भोलुम अलिकति कम हुने तथा इभेण्टहरुको भोल्युम भने विस्तारै बढ्ने गर्दछ । पछिल्ला दिनहरुमा विभिन्न खालका इभेन्टहरु, डिलरमिट, पोडक्टको बारेमा डोर टु डो प्रोग्रामहरु बढेका छन् । समग्रमा हेरेर ल्याउँदा दशैं तिहारपछि पुस माघसम्म ब्यापार कम नै हुन्छ । यसर्थ अहिले समग्रमा विज्ञापन बजार घटेकै देखिन्छ । शेयर बजार र आर्थिक गतिविधी सुस्ताएको वेला विज्ञापन बजार मात्रै बढने कुरा पनि भएन । निर्माण समाग्रिको क्षेत्रमापनि विभिन्न खालका समस्या देखिएका छन । नव निर्माणले पनि खासै गति लिन सकेको छैन । यी सवै कारणले गर्दा विज्ञापन बजारले अपेक्षितरुपमा सुधारको गति लिन सकेको छैन ।
विज्ञापनको भल्युम घटेको हो ?
समग्रमा नेपाली विज्ञापन बजारको भोलुम पछिल्लो समयमा घटेकै देखिएको छ । यसका अगि भेनजस्तै थुप्रै कारणहरु जिम्मेवार छन् ।
अहिलेको जस्तो दुई तिहाई वहुमत सहितिको स्थिर सरकार हुँदा त विज्ञापन बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नुपर्ने होइन र ?
हुनुपर्ने त हो । तर बजारमा आर्थिक गतिविधी निर्वाधरुपमा हुन सकेका छैनन । उद्योग ब्यवसाय र कलकारखाना अपेक्षाकृतरुपमा थपिन सकेका छैनन । ब्यवसायिले अझैपनि ससंकितरुपमा ब्यापार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कम्युनिष्टको सकरार भएर विश्वास कम भएो पो होकी ? सरकारको र राष्ट्र बैंकको नीति (बैंकिङ पोलिसी) पनि राम्रो देखिएको छैन । यी सवै कुरालाई हेर्दा विज्ञापन बजार स्थिर भएर वसेको अवस्था छ ।
हाल नेपाली विज्ञापन बजारमा बार्षिक कतिको कारोवार हुन्छ ?
समग्रमा हेर्दा हालसम्म नेपाली पिवज्ञापनको बजार र आकारको बारेमा कुनैपनि सर्वे भएको देखिँदैन ।सरदर बार्षिक करिव ७ अर्ब रुपैयाँको प्रत्येक्ष तथा अप्रत्येक्ष कारोवार भएको विज्ञापन संघको अनुमान छ । यद्यपी यो आधिकारिक आँकडा होइन ।
अवका दिनमा विज्ञापन बजारमा के होला ?
अवका दिनमा सरकारी नीति र वैंकिङ नीति राम्रो भयो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । टेलिभिजनहरुमा राम्रो राम्रा कार्यक्रमहरु आउन थालेका छन् । यसको प्रभाव बजारमा राम्रो पर्न सक्छ । पेपर मिडियामा भने विज्ञापन केही घट्दै गएको पनि छ । समग्रमा बजार बढ्ने अपेक्षा हाम्रो छ ।
नेपालको विज्ञापनको बकास्केट भन्दा मिडायाको संख्या धेरै भएको हो ?
समय सापेक्षरुपमा भन्नुपर्दा हामीकहाँ विज्ञापन र मिडियाँ दुवै बढेको भए त्यो ब्यालेन्स हुने थियो । तर मिडियाँ बढ्यो । जुन अनुपातमा मिडिया बढ्यो त्यो अनुपातमा विज्ञापन बढेन सकेन । विज्ञापन त्यस अनुरुपमा बवढ्ने वित्तिकै त समस्या देखिन थाल्यो । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीकहाँ विज्ञापन भन्दा मिडिया उद्योग नै धेरै भएको हो ।
यो क्षेत्रमा कत्तिको स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ ?
विगतमा यो क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको थियो । अहिले त्यस्तो छैन । पहिला तँछाड मँछाड नै हुन्थ्यो विज्ञापन तान्न । अहिले त्यस्तो हुँदैन । गोरखापत्र संस्थानको रेटभन्दा ८० प्रतिशत कममा पनि विज्ञापन लिन्थे । सरकारले त्यस्तैलाई टेण्डर दिन्थ्यो । त्यो सिधै गठी थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । मिडिया सचेत वनेको छ । ठगी कम भएको छ । विग हाउसहरुलाई कमीशन भन्दापनि सर्भिस चाहिएकोले अस्वस्थाकाकारणपन िअहिले प्रतिष्पर्धा कम भएको छ ।
यति धेरै एजेन्सी आवश्यक छ ?
छैन । नेपालमा करिव ५० वटा एजेन्सी भए पुग्छ । तर अहिले सयौंको संख्यामा एजेन्सी छन् । एजेन्सी थेरै हुनुमात्रै पनि राम्रो होइन ।
विज्ञापन एजेन्सीकोपनि मर्जर आवश्यक भएको हो ?
सरकारको प्रष्ट नीति नभएसम्म जे गरेपनि केही हुँदैन । विज्ञापनको कामगर्न यो बिषयमा पढेको, अनुभव संगालेको, कर र अन्य सुविधाहरु प्रष्ट तोकिएको अवस्थामा यस्ता समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् । ब्यवसायिक प्रतिष्पर्धा भए संख्या स्वत घट्छ । अहिले त एक दुई हजार तिरेर वडा काार्यालयमा पनि एजेन्सी दर्ता गर्न पाइन्छ । यतिधेरै प्रकृया पुरागरेर १५÷१६ बर्षदेखि काम गरिरहेका हामीहरुजस्ता पुराना र अनुभवी संस्था र झोलामा एजेन्सी वोकेर आउनेलाई एउटै नजरले हेरिन हुँदैन ।
क्लिनफिड नीति कहाँ पुग्यो ?
विगत १२÷१३ बर्ष देखि क्लिनफिडको अवधारणा आएको हो । म आफैं विज्ञापन संघको अध्यक्ष छँदा देखि नै यो अवधारणा ल्याइएको हो । तर अहिले नीति वनिसकेपछि र सवै तयारी भैसकेपछि एकाएक कार्यान्वयन हुनवाट रोकियो । सरकारले नचाहे केही नहुने रहेछ । अव यो कहिले कार्यान्वयन हुने भन्ने सरकारको हातमा छ ।
सरकारकै अनिच्छाले लागु नभएका हो ?
हो । सरकारकै अनिच्छाले यो नीति वनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । कसको कहाँ केमा लगानी छ र लागु गर्दा कसलाई के अशर पर्छ भन्ने कुराहरु छन् । यो प्रष्ट वाहिर आएको छैन । यो नीति लागु भएको भए विज्ञापन बजारमा २५ अर्बको बार्षिक कारोवार हुन्थ्यो । अहिलेको डिजिटल प्रविधिमा त यो क्लिनफिड नीति अटोमेटिकरुपमा लागु हुनुपर्दथ्यो । यसवाट सवै कुरा प्रष्ट वाहिर आउँछ । कुनै कुरा लुक्दैन । त्यही कारणले नै यो लागु हुन दिइएन । ब्ल्याकमेल गर्न पाइँदैन भनेर पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ढिलाई गरिएको हुनसक्छ । यस्तो अशर बढी पर्नेमा सरकारसँग निकट र कुनैको पार्टनरसिपमा चलिरहेका ब्यवसायपनि हुन सक्छन् । यीनै कारणले यो नीति लागु हुन सकेको छैन ।